२८ अर्ब सकिँयो भूकम्प पीडितका घर कहिले बन्ने ? - HAMRO YATRA
२८ अर्ब सकिँयो भूकम्प पीडितका घर कहिले बन्ने ?
काठमाडौं, बैशाख । प्राधिकरणले ५ लाख ३४ हजार ५३ भूकम्पपीडित परिवारलाई पहिलो किस्तामा ५० हजारका दरले २६ अर्ब ७० करोड २६ लाख ५० हजार आवास निर्माणको अनुदान वितरण गरेको छ। दोस्रो किस्तामा ८२९ घरपरिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले १२ करोड ४३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । तेस्रो किस्ता भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन । अहिलेसम्म २६ अर्ब ८२ करोड ७० लाख प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि खर्च गरेको छ । तर, तेस्रो किस्ता वितरण नभएकाले प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार कसैको पनि घर निर्माण पूरा भएको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, गैरसरकारी संस्थामार्फत वितरित अनुदानबाट मात्र चार सय २० भूकम्पपीडितले घर निर्माण सकेर छानो लगाएका छन् । प्राधिकरणको २४ चैतसम्मको विवरणमा भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा मात्रै गैरसरकारी संस्थाको सहित २७ अर्ब ७३ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माण कार्यविधिअनुसारको तीनै किस्ता जम्मा चार सय २० घरपरिवारले बुझेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब आठ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ दिने प्राधिकरणको कार्यविधि छ । घरको जगका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार, घरको गारो लगाएपछि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार र छाना लगाउन अन्तिम किस्ताको एक लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले तेस्रो किस्ता बुझ्ने कम भए पनि निराशालाग्दो अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म घर बनेको संख्या न्यून देखिए पनि निराश हुने स्थिति छैन । अबको तीन महिनाभित्र यो संख्या धेरै बढ्नेछ,’ भुसालले भने, ‘बर्खाअघि सबैले तेस्रो किस्ताको रकम लैजान्छन् । सबैको घर बर्खाअघि नै बनिसक्नेछ ।’